Manambara Sarahah Tool | HacksDirect
Oktobra 19, 2017 Uncategorized
Efa volana vitsivitsy, ary izany dia fampiharana ara-tsosialy antsoina hoe "Sarahah" dia naka ny antsasaky ny olona ny fotoana lany amin'ny haino aman-jery sosialy. Izany no tonga ny vaovao 'lohahevitra mafana' ny olon-drehetra dia miresaka momba sy ny fampiasana tamin'izany andro izany. Ka inona tokoa moa Sarahah? Izany dia fampiharana izay mamela anao mandefa hafatra tsy mitonona anarana ho any amin'ny mpampiasa, ary ny zavatra tsara momba izany dia tsy voatery hisoratra anarana ny tenanao izany mba ho afaka handefa ny hafatra. Raha Tsy te-handray azy ireo, haniraka azy fotsiny nefa tsy voatery hisoratra anarana; Azo antoka fa izany be dia be ny maka entana eny amin'ny olona rehetra ny sorony.
Ny fampiharana dia tena tsotra ny miasa. Rehetra tsy maintsy atao dia misintona izany ho an'ny iOS sy ny Android, na hanomboka. Raha te-handray hafatra avy eo fa loatra, dia tsy maintsy misoratra anarana ianao amin'ny fampiharana ny fanomezana amin'ny vaovao toy ny anarana sy ny adiresy email. Misy ihany koa ny tranonkala fa afaka mahazo, Raha vao tsy manana ny finday, mba hahitana izay mahazo hafatra ianao. Ny fampiharana Toa toy ny mahaliana iray, ary indrindra fa eo anivon'ny tanora, satria tsy afaka toa haka izany amin'ny fotoana rehetra eny ela.
Rehefa omena fahafahana hilaza zavatra ny olona iray nefa tsy voatery hanambara ny maha, Matetika izy ireo no hita amin'ny birao. Noho ny tena mampientam-po mahazo ity, dia mahazo kely te hahalala ny hafa hahafantatra izay naniraka ireo hafatra. Azonao atao ny mahita hoe iza no mankafy ny zava-miafina rehetra amin'ity indray mitoraka ity, na ny fomba hafa manodidina. Inona no ho tsapanao raha toa ianao hahafantatra fa misy farany ny zavatra izay afaka manampy anao hanenjika ireo anarana? Pretty faly, marina? tsara dia, hamehezany ny tenanao, satria izay ananantsika ao amin'ny drafitra ho anareo no handeha hamono tena fa te hahafanta-javatra ny anao.
Ny fitaovana manambara Sarahah dia karazana Hack ho amin'ity fampiharana izay mamela anao hahita ny anarana sy ny hoe iza amin'izay naniraka anao ireo tsy fantatra anarana hafatra. Izany dia ho tratra rafitra izay ny mpampiasa ny adiresy IP dia fantarina, ary avy eo dia ny manan-danja toy ny anarana sy ny tsipiriany adiresy email dia natolotra ny iray toerana,. Ny fitaovana dia tsy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, ka tsy mila miahiahy momba ny fampiasana azy io. Izany dia fotsiny mba hahatonga ny fiainanao kely tsy dia liana.
Ny azo atao amin'ny fitaovana manambara izany dia tsy misy farany. Ianao izao dia manana ny fahafahana hahafantarana izay olona any am-piasana, na mieritreritra momba anao na ny olona izay miantso ny namanao no tena namanao na tsia. Ny lanitra no fetra amin'ny fitaovana ity; izany hoe raha toa ny olona hahafantatra ny momba azy io sy ny fampiasana intsony ny Sarahah rindrambaiko tany am-boalohany. Noho izany, mandra-mitranga, mampiasa ny fahafahana mamaly ireo fanontaniana eo amin'ny lohany ny Sarahah haneho fitaovana.
Andramo ka mankafy!